Tiyaatarka Apple Store Tower ee ku yaal magaalada Los Angeles ayaa la furi doonaa Juun 24 | Waxaan ka socdaa mac
Meel cusub oo ku dambayn doonta inay noqoto mid caan ah iyo maxaa diidaya, calanka Apple Store ee Los Angeles. Tiyaatarka Apple Tower, Waxay ku dhowdahay inay dhameystirto shaqooyinkeeda waxaana loo furi doonaa dadweynaha 24-ka Juun. Had iyo jeer way wanaagsan tahay in la bixiyo war sidan oo kale ah. Waxay umuuqataa in noloshu waxoogaa caadi kusoo noqoneyso kahor faafida halkaasoo wararka ugu weyn ay ahaayeen xirnaanshaha dukaamada sababo laxiriira xaddidaada viruska iyo heerarka sare ee cudurada.
24-ka Juun ee soo socota, Apple waxay qorsheyneysaa inay dukaan cusub ka furato magaalada Los Angeles taas oo umuuqata inay noqon doonto mid kamid ah kuwa taariikhda sameyn doona. Goobta lafteedu horeyba waa gaar. Marka waxay leedahay waraaqo badan oo codbixin ah si ay u noqdaan wax aan caadi ahayn. Bakhaarka Tiyaatarka Apple Tower Waxay ku yaali doontaa tiyaatar taariikhi ah oo ku yaal Broadway Tiyaatarka Degmada Los Angeles. Markuu furmo, wuxuu noqonayaa dukaanka tafaariiqda ee ugu horreeya Apple ee ku yaal bartamaha magaalada Mareykanka.
Mar shaneemo cusub, Tiyaatarka Apple Tower wuxuu matalaa hal-abuurnimada iyo hal-abuurnimada ay Los Angeles iyo Apple labadaba caan ku yihiin. Dukaankii ugu horreeyay ee Apple ee ku yaal bartamaha magaalada Los Angeles, tani waxay noqon doontaa meesha aad ka ogaan karto alaabada cusub, hel waxyi hal abuurkaaguna ha iftiimiyo.
Apple waxay dayactireysay Tiyaatarka Tower dhowr sano. Sannadkii 2018, shirkaddu waxay wadaagtay jees jees ah sida gudaha u ekaan karo. Waqtigaas, shirkaddu waxay sheegtay in goobta ay ku taal dusha sare ee Apple Stores ayna ka duwanaan doonto wax kasta oo magaalada ka jira. Qaar ka mid ah nashqadaynta waxay ku darsan karaan naqshadaha taariikhiga ah ee Renaissance ee tiyaatarka, iyadoo waliba lagu darayo taabasho masraxa cusub Bakhaarka jireed ayaa marti gelin lahaa dhacdooyin loogu talagalay in lagu soo jiito boqolaal qof. Dukaanka ayaa ka faa'iideysan doona doorka Los Angeles oo ah xarun dhaqan iyo mid warbaahineed si ay u martigeliso wadahadallada khubarada ah ee telefishanka, filimka iyo muusikada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Tiyaatarka Apple Store Tower ee ku yaal magaalada Los Angeles ayaa la furi doonaa 24-ka Juun
Sida laga soo xigtay Prosser, Beats Studio Buds waxaa la sii deyn doonaa July 21